Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Fampisehoana Paris Air 2019: Boeing hanehoana ny fanavaozana
Boeing dia hampiseho ireo vokatra marobe sy vokatra fiarovana, serivisy ary teknolojia ao amin'ny Paris Air Show 2019, izay tanterahina ny 17-23 Jona ao amin'ny seranam-piaramanidina Paris-Le Bourget. Ny fisian'ny orinasa sy ny hetsika ao amin'ilay seho dia hampiseho ny fahavononany amin'ny fanavaozana, ny fiaraha-miasa amin'ny indostria ary ny fiarovana.
Amin'ny fampirantiana an'i Boeing, ny mpitsidika dia afaka milentika ao amin'ny teatra lehibe 360 ​​degre ary hianatra bebe kokoa momba ny fahaizan'ny orinasa mandritra ny androm-piainan'ny vokatra. Ny fampirantiana ifanaovana dia hanasongadinana ihany koa ny fianakaviana fiaramanidina sy serivisy farany an'i Boeing ary hanome ny mpitsidika ny fijerena voalohany ny fahitan'ny orinasa ny ho avin'ny fivezivezena. Ny fampirantiana dia ho hita ao amin'ny Static Display C2.
Ao amin'ny seranam-piaramanidina, Air Tahiti Nui 787-9 dia hampiseho ny fahaiza-mamaky sy ny zava-baovao nahavita ny 787 ho ankafizin'ny mpandraharaha sy ny mpanjifa. Fiara mpitatitra fiaramanidina mpiambina Boeing 737 sy fiara fitaterana an'habakabaka (PAV) no hiseho tampoka.
Ny departemantan'ny fiarovana amerikana koa dia haneho sehatra Boeing maromaro, ao anatin'izany ny helikoptera fanafihana AH-64 Apache, ny helikoptera CH-47 Chinook, ny mpiady F-15, ny fiaramanidina mpiambina an-dranomasina P-8 ary ny fampisehoana an-tsehatra iraisam-pirenena. an'ny tanker KC-46.
Boeing dia hanao andiana fampandrenesana vaovao ho an'ny haino aman-jery mandritra ny seho. Ny haino aman-jery manatrika ny seho dia tokony hanamarina ny fandaharam-potoanan'ny fampahalalana isan'andro momba ny fanavaozana ao amin'ny Boeing Media Chalet (A332). Afaka misoratra anarana ihany koa ny haino aman-jery handraisana ireo fanavaozana Boeing amin'ny alàlan'ny mailaka:
Best Friends Animal Society dia manolotra hotely voalohany